यो बिहानीले देखाउन खोजेको दिन त कहाली लाग्दो पो छ!
म चाहन्छु अंग्रेजीको उखान छ गलत साबित होस!
शेयरको इन्डेक्स वा आर्थिक इन्डेक्स भन्दा तोडफोड र उग्र नाराको इन्डेक्स बढी छ । अरु देशहरु हाइ स्पीड रेल बनाउने काम मा विकास गर्छन तर हामी रेलिङ भत्काउनेमा विकास गर्छौं । अरु बनाउनलाइ महान ठान्छन हामी भत्काउनलाई पुरुषार्थ ठान्छौं । त्यसैले हाम्रो बिहानि रेलिङ भांचेर शुरु हुन्छ दिन के मा हुन्छ र रात के मा पुगेर टुंगिन्छ भन्नै गार्हो ।
तर ३ महिने बिहानी ले देखाइसक्यो दिन पक्कै खतरनाक हुनेछ ।